डेमोक्रेसीका थियरी बाउडेट फोरम (एफवीडी) "मिनर्वाको उल्टोले आफ्नो पखेटा फैलाउँछ": मार्टिन व्रिजल्याण्ड
डेमोक्रेसीका थियरी बाउडेट फोरम (एफवीडी) "मिनर्वाको उल्टो आफ्नो पखेटा फैलाउँछ"
मा दायर समाचार विश्लेषण	by मार्टिन भिजल्याण्ड	21 मार्च 2019 मा	• 34 टिप्पणिहरु
गत रातको उनको विजय भाषणको सुरुवातमा थियरी बाउडेटले अन्तिम रातलाई भने:मिनर्वा उल्लू रातमा आफ्नो पखेटा फैलाउँछ"। बीचमा बमोजिम भाषण धेरै नै प्राप्त भयो ध्यान र आलोचना, तर केहि मान्छेले यो लायकको लागि यस भाषणमा डबल तल देख्न सक्छ। Baudet द्वारा उल्लिखित खनिज उल्लू को वास्तविक अर्थ यो हो: उल्लेखित फ्युमेमेसेन्स; मोलोच। फ्रीमेमेसेन्सहरू (खोपड़ी र हड्डिहरु, थ्युल सोसायटी, आदि) नेदरल्यान्डमा भर पर्दा फैल्यो।
हेगेलियन डिटेक्टिक्सको खेल तपाईको आँखा अगाडि प्रकट हुन्छ। लुकेका सन्देश यो हो कि लीनन मिनर्वा क्लब नियन्त्रणमा छ। Baudet, शाही को सन्तान क्लाइन्न्डेल इन्स्टीट्यूट, आफ्नो साँचो प्रकृति सादा दृष्टिमा लुकाइएको देखाउँछ। क्लिन्न्डेन्डेलको स्पिन डाक्टरले शम लोकतान्त्रिकमा आफ्नो नियन्त्रित विपक्षी दललाई नियन्त्रणमा लिएका छन् जसमा विरोधले बायाँ-दायाँ बल मैदानलाई ठूलो उचाइमा उचाल्न सक्छ। (भिडियो अन्तर्गत पढ्नुहोस्)
थियरी Baudet सबै केहि नाम गर्न सक्छन् कि ठूलो डेटा विश्लेषणले देखेको छ कि मान्छे बीचको जीवन बिताएको छ। उनले यसलाई पनि प्रोत्साहन दिन सक्छन्, किनकि युरोप र सम्पूर्ण पश्चिमको वरिपरि बढ्नै पर्छ। यो अप्टिमा प्रपत्रमा हेगेलियन सफलता सूत्र हो। दुई विरोधीहरु को डायलिकिक जो वर्तमान उत्पन्न गर्दछ: विरोधाभास वांछित संश्लेषण को लागि नेतृत्व गर्दछ, दार्शनिक हेगगल जस्तै। र यसैले Baudet मार्क Rutte एक आर्थिक बकवास बोलाउन सक्छ:
"हामी विश्वविद्यालयहरू, पत्रकारहरू, हाम्रा कला अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू र हाम्रो भवनहरू डिजाइन गर्नेहरू र हाम्रा सबै प्रशासकहरूलाई कमजोर बनाउनुभएको छ। गिरिएको सञ्जालहरूको एक clique; व्यावसायिक बैठकहरू; जो मान्छे आफ्नो जीवन मा कुनै पुस्तक पढ्न छैन र थाहा छैन कि लामो समय मा महत्वपूर्ण मुद्दाहरू छन्। दुर्भाग्यवश, उनीहरूले हाम्रो देशको निर्णय गर्ने निकायलाई नियन्त्रणमा राख्छन् र गलत छनौटहरू समय र समयलाई अज्ञानता र अनौठो आत्म-रुचिको उत्सुक मिश्रणमा बनाउछन्। "
लामोको लागि होइन! र यसैले यो चला्यो, र यसैले मान्छे भ्रम हो कि दायाँ-पंख शिविर जित्न जान्छ र ठूलो परिवर्तनको कारण हुन्छ।
हामी यस वृद्धि को युरोप र बाँकी अमेरिकाबाट दाँयाबाट पहिचान गर्छौं, जहाँ डोनाल्ड ट्रम्प पनि शिविर भित्र भेट्टाउन सकिन्छ। हामी यसलाई ब्रेक्सिट क्याम्पबाट जान्दछौँ। हामी यो इटली र धेरै अन्य युरोपेली देशहरूबाट जान्दछौं। ब्याट्रीको खण्ड उच्च भोल्टेजमा सेट गरिएका छन्। यद्यपि, यो आगामी संश्लेषणको लागि तयारी छ, जसलाई दायाँ पश्चिममा पर्दा आर्थिक र सामाजिक आपदामा जोडिएको छ।
ब्रेक्सिटको विफलतामा मैले भविष्यवाणी गरेको छु र अमेरिकी अर्थव्यवस्थाको पतनले यो (नियंत्रण नियन्त्रित) महत्वपूर्ण दायाँ-विंग समूहसँग जोड लिनेछ। त्यसैले यो छ डिजाइनद्वारा त्यो दायाँ अब जित्न सक्दछ, किनकि यसले इच्छित ध्रुवीकरणलाई योगदान गर्दछ जुन अराजकता र त्यसपछि 'नयाँ अर्डर' सिर्जना गरिनेछ। विश्वव्यापीकरण समूह र एट-ईयू दाई-वाइङ क्याबल यो निकट भविष्यमा यस आर्थिक आपदा र कट्टरपंथीकरणसँग जोडिएको छ। अराजकताले उत्पन्न हुने नयाँ बलियो हातको लागि शक्ति वैक्यूम प्रदान गर्दछ। यो टर्की र पुनःप्राप्त तुर्कमेन्ट साम्राज्यद्वारा ईयूको अधिग्रहण (यहाँ पनि भविष्यवाणी गरिएको लामो समयसम्म) को लागि शक्ति वैक्यूम प्रदान गर्दछ। यसले महत्त्वपूर्ण विचारधाराहरूसँग अन्तिम सम्झौता पनि गर्नेछ; तिनीहरूलाई साजिश विचारधाराहरू बोलाएर। अराजकताको लागि जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा, आलोचनाको कुनै पनि प्रकार निश्चित रूपमा प्रतिबन्ध लगाईनेछ र त्यहाँ केवल 1 सत्य हो र यो सत्य हो कि बलियो हात लागू हुनेछ।
थियरिरीले आप्रवासन दोष दिन सक्छ र उसले सक्छ यूट्रेट आक्रमण PsyOp मूडमा खेल्न। र हामी पनि मासोनिक प्यान (मिनर्वा क्लिन्जेन्डेल सन्तान) Baudet को साँचो अनुहार को पहिचान गर्छौं। र सधै नियन्त्रणमा रहेको विरोधको खेलमा, उपेक्षात्मक भावना खेल्न र ईन्टर गरिएको छ। जब भोल्टेज विरोध पोलहरूमा लागू गरिन्छ, भोल्टेज उत्पन्न गरिएको छ। हामी अब उद्धार मा कल गर्छौं, तर तपाई मतदाता मात्र लोकतान्त्रिक नाममा भ्रममा राख्नुहुन्छ। एलिटेर क्लेन्न्डेलेल मिनर्वारा प्याडो बेउडले मानिसहरूलाई बीचको ताजा भावनाहरू खिच्न र हिँड्न सक्छ। र जबसम्म अर्को लोक चालक पछि मान्छे चलाउछ, ब्याट्रीलाई अधिक चार्ज गरिएको छ। त्यसपछि निर्वहन पालन गर्न सक्छ; आगामी अराजकता र त्यस अराजकताबाट नयाँ अर्डर आउँछ र भनिन्छ: "फेरि कहिल्यै!" यो एक प्रक्रिया हो जुन सम्पूर्ण पश्चिममा प्रकट हुन्छ र यसले तपाईंलाई मास्टर लिपि पहिचान गर्न मद्दत गर्दछ। त्यो मास्टर स्क्रिप्टको बारेमा सबै पढ्नुहोस् यो लेख.
हामी युरोपमा अराजकताको लागि तयारी गरिरहेका छौं; टर्की (Ordo ab Chao) द्वारा आगामी अधिग्रहण, अमेरिकी साम्राज्यको आगामी पतन र (त्यस पछि, मध्य अवधिमा) यरूशलेमको तेस्रो विश्व युद्ध। यसबाहेक, तथापि, मानिसहरूको अंश विजयी हुन्थ्यो। Baudet pawn को लागि गलत आशा। यो हेल्गेरियन खेल को माध्यम ले हेर्न को लागी समय छ र जो उनि वास्तव मा हो उनिहरु को लागि राजनीतिक अभिनेता को पहिचान गर्न को लागि। केवल तपाईं तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ। के तपाईं सुरक्षा नेट प्यादाको लागि गिर हुनुभयो? ती व्यक्तिहरूले समाजमा विरोधीहरूलाई कसरी गति दिन सक्छन्? तपाईं लोकतान्त्रिक भ्रमको लागि गिरिसकेका छौं; शाही परिवार क्लेन्डेन्डेल इन्स्टीट्यूट र मिनेरिया द्वारा संचालित।
यस लेखको तल टिप्पणीहरू पनि पढ्नुहोस्
स्रोत लिङ्क सूची: telegraaf.nl
फोरम डेमोक्रेसी (एफभिड) मा हेनक ओटटेनको प्रस्थान यति अनुमानित छ
माराकेश संधिको बारेमा एकदम केहि: कुट्जू!
Thierry Baudet को बिरुद्ध ठूलो प्रदर्शन
यूरोपीय चुनाव र FvD सुरक्षा नेट ('आप्रवासनहरूको उदाहरणद्वारा रिलिज)
ट्याग: Baudet, Clingendeal, लोकतान्त्रिक, विशेष, फोरम, FvD, संस्थान, lang, अधिक, मिनर्वा, होइन, विजय, विजय भाषण, बोली, Thierry, बोली, उल्लू, लागि
21 मार्च 2019 मा 10: 34
केवल उल्लु च्याटहरू हालको प्रणाली समर्थन गर्न जारी राख्छन् ...
... र आमा र पिताको पखेटामा उत्सुकता लुकाउन जारी राख्नुहोस्।
21 मार्च 2019 मा 12: 10
म मिनर्वा = मोलोच मा गलत हुन सक्छ, तर फिर भी, हामी स्पष्ट रूप देखि गोप्य समाज संगठनों को बारे मा कुरा गर्दै छन् र मिनर्वा उल्लू एक महत्वपूर्ण प्रतीक (Baudet पनि जान्दछन्)। यो स्पष्ट छ कि Baudet मिनर्वा र क्लाइन्न्डेल तार stronghold बाट आउछ।
24 मार्च 2019 मा 10: 14
उल्लू सादा दृष्टिमा लुकेको छ
21 मार्च 2019 मा 12: 27
केवल उल्लू देख्ने एक उल्टो यो हो, तपाईंको दैनिक खरीदारी संग पनि बचत।
21 मार्च 2019 मा 16: 02
श्री डी ओ ओल्ल को बदल आँखाहरु को बारे मा:
21 मार्च 2019 मा 17: 36
@ De Wage दास, राम्रो टुक्रा! मलाई याद छ कि म यस साइट मा पहिले छद्म चिन्ह को तहत यस लेख को पढें।
"साइन्सहरू र प्रतीकहरू संसारमा शासन गर्छन्, न त शब्दहरू र नियमहरू।"
21 मार्च 2019 मा 12: 29
र यहाँ एक राम्रो व्याख्या किन ..
21 मार्च 2019 मा 12: 41
'ठूलो विजय डेमोक्रेसीका लागि फोरम मतदाता असन्तुष्ट'
हजुरआमा र त्यो असहमति अहिले राम्रो छ
21 मार्च 2019 मा 12: 35
थप गर्न थप केहि छैन, मैले मेरो मतदान जलाए।
म यस योगदानको लागि अतिरिक्त स्नैप जमाई, श्री विर्जल्याण्ड।
श्रद्धा र प्रेम।
21 मार्च 2019 मा 13: 44
युवा उल्टोहरूलाई "ओल च्याट" भनिन्छ। "नाक" Holleeder को प्रक्रिया को समयमा न्यायाधीश को पर्दा को एक टिप दिएको छ! नीदरल्याण्डमा वास्तविक शक्ति भएकाहरू, म त्यो डराउँछु?
21 मार्च 2019 मा 13: 46
राम्रो लेखिएको लेख। म यो बारेमा के सोच्नुहुन्छ। Baudet 100% नियन्त्रण विपक्षी हो, उनीहरूलाई वाइल्डर्समा झण्डा राख्नु पर्छ। वाइल्डर्स वास्तव मा पास छ। Baudet एक व्यक्ति को लागि पार्टी हो जुन वीवीडी को कार्य गर्न चाहन्छ। रूटले यूट्रेटको घटनाबाट धेरै लाभ उठाएको छ, जुन त्यो ठुलो छ। तपाईंले सबै हरा चीजहरू सिविल सेवकहरूलाई लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ, बायाँ जेबहरू भर्नुहोस् ... दायाँ जेबहरू। छुट्टीमा भारतमा तर क्रेडिट कार्ड र बीमाको साथ। सबै कुरा त्यहि रहन्छ। कुनै पनि पार्टीहरूसँग एकदम बहुमत छैन र यसैले अनि एन्ड्रेनसँग सहयोग गर्न अनिवार्य छ। र यसैले सबै पक्षहरु नीति मा जटिल हुन सक्छन्। त्यो इरादा हो।
Freemasonry आफ्नो अनुहारमा सादा दृष्टिमा पदोन्नति गरिएको छ। ओह ठीक छ, दासहरूले प्राप्त गर्दैनन्।
21 मार्च 2019 मा 15: 16
मार्क ट्वेन - "यदि मतदानले कुनै फरक पारेको छ भने हामीलाई यो गर्दैन।"
र त्यो कसरी यो छ 😀 छ
21 मार्च 2019 मा 16: 35
... म आफैलाई हिट गर्न चाहन्न, तर यो इंगित गर्दछ कि यूट्रेट र चुनावमा प्रायः आक्रमणको बीच सम्बन्ध छ। यो सबै अनुमान छ ..
यस्तो निर्वाचनका लागि भर्खरै पुलिस र टर्कीको अधिकारीको बीचमा यो चिन्तित टुक्राको रूपमा ... Erdogan thx! 🙂
21 मार्च 2019 मा 16: 39
यो Freemason चिनाई र Bilderberger को आतिथ्य को लागि धन्यवाद .. Slabdullah को दाईं ओर बैठे मान्छे जो अब आफ्नो उप प्रधानमन्त्री भन्छन्, फेरि यो एक छोटा क्लब हो र कुर्सी नृत्य पूरी स्विंग मा छ ..
21 मार्च 2019 मा 17: 06
यो नीदरल्याण्ड र टर्की बीच सहमति भएको थियो 100%। धेरै अधिक प्रचार को मतलब यो निर्देशित गरिएको थियो, तुर्क र डचमेन को लागि योजना बनाई जो दुवै को लागि गिर गयो। भेडाले प्रभाव पार्न सजिलो छ। तिनीहरू केवल यसको लागि सोध्छन्।
21 मार्च 2019 मा 19: 31
न्युयोर्कले अपराधमा सहयोग गर्दछ, हामी भन्नेछौं कुच
21 मार्च 2019 मा 16: 59
खैर, खोलो चमडा भनेको सामान्य शंकास्पद हो जसले मुख्य स्थानहरू राख्छ। म यो अधिक विस्तारमा व्याख्या गर्न जाँदैछु जो तिनीहरू हुन्।
21 मार्च 2019 मा 17: 08
..होल्लेडरले मलाई त्यहि व्यक्तिलाई हँसिलो बनाउँदैन जुन जो नामक हेनिनन अपहरणमा संलग्न थियो र पत्रुसले ओएम रेर्गेनिफ डे डे वेसको नाममा उनको नामहीन रङ्गमा पूर्णतया दूध खाएको थियो र भेडा बोर बन्छ भने हामी अझै तिनीहरूलाई छुटकारा छैनौँ। त्यसोभए हामी ती खोखो छालाहरू पुरानो बक्सबाट एकैचोटी पटक्कै पिउने गरी ..
21 मार्च 2019 मा 18: 45
एक पल वा विषय शायद तर वास्तवमा थाहा पाईएको छ कि प्रहरीले कसरी पत्ता लगाउनुभयो कि हेनेनकन र तिनको चालकले बन्द गरेको थियो।
यो मलाई कहिल्यै स्पष्ट हुँदैन। रहस्य?
21 मार्च 2019 मा 17: 53
र कृपया यो प्रचारको लेखमा प्रतिक्रियाहरू नपढ्नुहोस् 🙂:
21 मार्च 2019 मा 20: 31
बाउडेटले प्रयोग गरेको वाक्य जर्मन दार्शनिक हेगलको उद्धरण जस्तो देखिन्छ। तिनले यस्तो लेखे: "मिनर्वाको उल्टोले सूर्यसम्म यसको उडान सुरु गर्दैन।" हेगलले यो घटनाले लगभग एक चोटि घटनालाई हेर्दा वा बुझ्नको अर्थ दिन्छ। "
राम्रो तपाईं केवल यो हेर्दा जब तपाइँ यसलाई ढोका खोल्नुहुन्छ
21 मार्च 2019 मा 20: 34
सबै अधिक Baudet एक मोहरा हुन र खेल कसरी खेलेको कसरी पुरा तरिकाले थाह पाउनु पर्छ।
यसको अतिरिक्त, RTL मार्टिन व्रिजल्याण्ड वेबसाइटको तिर प्रवाह गर्ने Google खोजहरू लाई यो शीर्षक प्रयोग गर्नु पर्छ।
21 मार्च 2019 मा 21: 21
तथ्य यो कि कुलीन उपकरण बडेटसँग मतदानको मासु र नियन्त्रित मिडियाको अगाडि क्यामेरामा यो दायाँ भन्न को लागी गम्भीरता छ। दुई चीजहरू देखाउँछन्, पहिला उहाँ छाया बल र दोस्रोमा राखिएको छ कि त्यो विश्वस्त छ कि जनावरहरु मा जानवरहरु को लगभग 70% -80% रूखहरु को लागि जंगल को देखिन सक्दैन ... किनकी यस देश मा अन्धा सबै राजाको पछि एक नजर हो
21 मार्च 2019 मा 21: 22
पसेज .. र सौभाग्य देखि बियर र चिप्सको आनन्द उठाउँदा आज रात फेरि खेल्नेछ
21 मार्च 2019 मा 22: 32
मलाई उसलाई स्वीकार्नु पर्छ, उसले घाँस मा सीधा बढ्न सक्दैन
Baudet: "हामीहरू जसले हामीलाई रक्षा गर्नु पर्छ द्वारा नष्ट गरिँदैछ"
21 मार्च 2019 मा 20: 57
मैले बुझें कि Baudet ले दुई ह्यान्डफोल्सलाई दक्षिण हल्याण्ड, वेइगल र पिल स्फफरमा एक सूचनाकारको रूपमा काम गर्न बोलाइयो। कुनै प्रणाली सदरमुकामले देखेको छ कि hs स्पष्ट। ती दुई मान्छे बस रिटायर गर्न सक्दैन। तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि यो सधैँ उकालो छ।
हजुरआमाले भनेकी थिइन। आशाको पूर्णता हाम्रो हृदय धकेल्छ। दासहरू के आशा गर्छन्? बदल्नुहोस्? वास्तवमा तिनीहरू पनि कार्य गर्न सक्दैनन्। बस दासहरूका लागि मेयनेजसँग बस फ्रिज। यो मजा रहनु पर्छ। जहाँसम्म मेरो चिन्ता छ ... रस
22 मार्च 2019 मा 07: 29
मलाई लाग्छ कि मिनर्वा र मोलोको उल्टो लिंक एकदम धेरै टाढा छ।
तर यो तथ्यको बावजुद Baudet अत्यन्तै विश्वस्त हुनुहुन्छ, त्यहाँ, मेरो विचारमा, एक मुख्य कारण छ कि Baudet को आवश्यकता हो।
र त्यो मतदान काउन्टरहरूलाई मानिसहरूलाई लिप्त गराउनु हो।
प्रजातान्त्रिक हो कि यदि मानिसहरू हेर्न जाँदैछन् कि त्यो मतदानले कुनै पनि अर्थलाई बुझाउँदैन किनकि तिनीहरू अझै सिन्धुलीमा छन्।
चाँडै मानिसहरू यस तथ्यलाई उठाउँछन् र बहिष्कार 'मत' बन्छ, तिनीहरूको शक्ति संरचना पतन हुन थाल्छ।
मान्छेहरूलाई मतदान गर्न, राजनीतिज्ञहरूले के गर्न चाहन्छन् जुन मानिसहरू सुन्न चाहन्छन्।
र एक जागृत जनसंख्या को बीच तपाईंलाई एक थियरी Baudet को आवश्यकता हो।
निस्सन्देह, कुलीन राजनेताहरूले आफ्नो आकस्मिक झूटलाई बेवास्ता गर्न र अप्रवास रोक्न चाहँदैनन्, तर यो (अस्थायी रूपमा) बलिदान हुन सक्छ।
Baudet भन्छन् कि उनले राजनीतिमा विश्वास पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छन्, अब उहाँले राम्रोसँग सफल भएको छ।
र त्यो वास्तव मा के कुरा हो (कुलीन को लागि)।
22 मार्च 2019 मा 07: 31
"राज्य परिषदले आफ्नो वार्षिक रिपोर्टमा संकेत दिएको छ कि राजनीति र परम्परागत राजनीतिक दलहरूमा विश्वास रहिरहन्छ र काम गर्दै लोकतन्त्रलाई खतरामा राख्छ।"
मैले 2017 बाट Volkskrant लेखमा पढें।
22 मार्च 2019 मा 09: 28
इरादा थियो कि तपाइँ केवल मोलोच शब्दको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाइँ एक भिडियोमा आउनुहुनेछ र टिप्पणी गर्नुहोस् जुन मैले व्याख्या गर्दछु।
22 मार्च 2019 मा 13: 25
20 मार्च नतिजाको शुरुवात
लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्, 2018 मा मिडियामा छलफल गर्नुहोस् RTL कार्यक्रम तालिकामा
यहाँ केही संवादहरू तर त्यसपछि अंग्रेजीमा
22 मार्च 2019 मा 17: 59
@ मार्टिन, तपाईंले यो AD लेख पढ्नु पर्छ। यो लेख यस टिप्पणीमा टिप्पणीको रूपमा टिप्पणीको रूपमा पढ्छ ... निराशा
एक फ्लोलोफरको रूपमा उल्टोको छवि कहिल्यै बनाइएको छ। यो केहि छैन कि Fabeltjeskrant मा श्री डी यू सबै जानकार कथाकार हो।
के हेगेल - र पनि Baetet - यसको मतलब: अन्तर्दृष्टि मात्र आउँछ जब केहि परिणामहरू वास्तवमा स्पष्ट हुन्छ। यो क्रुफियन जस्तै केहि देखिन्छ जस्तो लाग्छ 'तपाईले मात्र देख्नुहुनेछ'। यसैले Baudet अन्य चीजहरु, 'जलवायु पागलपन' को संदर्भित गर्दछ, जो उपाय उनको मानिन्छ कि धेरै ज्यादा पैसा खर्च गर्छ, उनको आँखा मा अपेक्षाकृत कम प्रभाव छैन।
22 मार्च 2019 मा 18: 18
ठीक छ, मैले उसलाई रातलाई देखे, तर मेरो वेबसाइटमा काम गर्ने समय थिएन।
तिनीहरू सँगसँगै पढ्छन् र त्यसपछि तिनीहरू देख्नेछन् कि दसौं मानिस मेरो वेबसाइटमा समाप्त हुन्छन् किनभने तिनीहरू Baudet द्वारा त्यस बयान खोज्न जाँदैछन्, त्यसैले तिनीहरूलाई Google परिणामहरूमा मलाई धक्का पुर्याउनु पर्छ।
यो एक ठूलो खेल खेलेको छ र तिनीहरू स्पष्ट रूपमा डराउँछन् कि मानिसहरू वास्तवमा जगेडा हुनेछन्। म केवल यो मेरो आफ्नै र मीडियामा लाखौं (यदि बिलियन छैन भने) र तिनीहरूसँग नियन्त्रण विकल्प मिडिया छन् र उनीसँग सोशल मिडियाको सम्पूर्ण सेना छन् र उनीहरूले इन्फिईजिएलर मित्तैब्रेटरमा उनीहरूको सञ्जाल छन् र उनीहरूले AIVD उपायहरू र थाहा पाउँछन्। (र यसलाई सबै नियन्त्रण गर्नुहोस्) र यति!
22 मार्च 2019 मा 19: 51
मिडिया / Macht Baudet ले समान चोर संग प्रस्तुत गर्दछ
मिडियाले केवल 1 प्रस्तुत गर्यो! मेडिटापर्क मा हजारौं चलचित्र चलचित्रहरू र एउटै मिडिया पार्कमा हजारौं क्यामेराहरू छन्, केवल 1 तस्बिर वा दुई मात्र
22 मार्च 2019 मा 21: 32
6 को लागि ग्यारेन्टी5/6मा ग्यारह ग्यारह वर्ष को उमेर मा पिम फोर्टुएन को हत्या भएको थियो: 05 हिट5गोलीहरु द्वारा हिट, उनको नजिकै6गोलेहरु लाई भेटयो र5पुलिस देखि एक्सएनमक्स पुलिस को बारे मा केहि थियो।
6 +5= 11 र6×5= 30
ग्यारहको अलावा हामी धेरै # पागल नम्बर # # extremelowfrequenty # # दोहोरो #
यसको अर्थ यसको लागि विस्तृत समय लाग्दछ र तिनीहरूले गरेका छन्। उही शैली प्रयोग गर्नको लागि व्यक्ति (र्ट) दिन को लागी प्रयोग गरिन्छ जुन तिनीहरूले यति धेरै चाहन्छन्।
« यूट्रिटमा आक्रमणको मृत निश्चित रूप देखि प्रमाणित छ कि यो एक PsyOp हुन सक्दैन?
Thierry Baudet को बिरुद्ध ठूलो प्रदर्शन »
कुल भ्रमण: 14.606.015